कसरी उत्तम एडीएचडी उपचार उपकरण छनौट गर्ने - जिउँदो मन - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
उत्तम ADHD उपचार उपकरण कसरी छनौट गर्ने
एडीएचडी एक धेरै सामान्य समस्या हो जुन सबै उमेरका मानिसहरूले अनुभव गर्दछन्। सायद तपाई आफैले यो रोग पत्ता लगाउनु भएको होला। सब भन्दा साधारण लक्षण कुनै पनि कुरामा धेरै समयको लागि ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम भइरहेको छैन। तपाईले हाइपरएक्टिभिटी पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईको विचार र आन्दोलनमा तपाई धेरै आवेगवान हुन सक्नुहुन्छ। यो अनुमान गरिएको छ कि आज 8% भन्दा बढी बच्चाहरूको यो अवस्था छ। यसले वयस्कको २% भन्दा बढीलाई असर गर्ने वयस्कतामा पुग्न सक्छ। केटाहरूसँग सामान्यतया केटीहरू भन्दा यो अधिक सामान्य हुन्छन्, र त्यहाँ धेरै उपचारहरू उपलब्ध छन्। विशेष गरी, त्यहाँ एक उपयोगी छ एडीएचडी उपचार उपकरण जुन तपाईं प्रयोग गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ यो अवस्था छ भने।
लक्षण एडीएचडी कागजात गर्न धेरै सजिलो छ। एक डाक्टर अक्सर एक व्यक्तिको ध्यान अवधि सम्बोधन संग शुरू हुन्छ। यदि तिनीहरू चुपचाप बस्न सकेनन, वा तिनीहरू धेरै लामो समयसम्म व्याख्यान वा कुराकानी सुन्न असमर्थ भए, तिनीहरूसँग यो अवस्था हुन सक्छ। हाइपरएक्टिविटी यो अवस्थासँग पनि सम्बन्धित छ। यसैले यसलाई ध्यान घाटा hyperactivity विकार भनिन्छ। यो रोग होईन। यो केवल मानसिक विकार हो जुन आनुवंशिक हुन सक्छ वा कोही कोही बस्ने वातावरणको कारणले हुन सक्छ।
कस्तो छ एडीएचडी निदान गरियो?
डाक्टरहरू सामान्यतया प्रश्नहरूको क्रमसँगै सुरू हुन्छन्। तिनीहरू गतिविधि वा कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने तिनीहरूको क्षमताको बारेमा सोधेर सुरू गर्नेछन्। उनीहरूले सोध्नेछ कि यदि तिनीहरू चीजहरू सजिलैसँग मिलाउन सक्षम छन्, वा यदि त्यहाँ धेरै जानकारी भएमा तिनीहरू अभिभूत हुन सक्छन् भने। यस अवस्थाबाट पीडित व्यक्तिहरू सजिलै विचलित हुन्छन् र प्रायः मेमोरी गुमाउने वा बिर्सिने बित्तिकै पीडित हुन्छन्। यो यी प्रश्नहरूको उत्तरहरूको योगफल हो जुन सकारात्मक निदानमा नेतृत्व गर्दछ।
एडीएचडी कसरी व्यवहार गरिन्छ?
यो धेरै तरीकाले उपचार गर्न सकिन्छ। यो मनोवैज्ञानिक अवस्था हो, यसैले औषधि उपचारले समाधानको रूपमा काम गर्न सक्छ। यसले मानिसहरूलाई शान्त हुन, अझ स्पष्टसँग सोच्न र अधिक विचारशील हुन अनुमति दिन्छ। यी सामान्यतया उत्तेजकहरू र ती गैर-उत्तेजक औषधिहरू बीच विभाजित छन्। लक्ष्य भनेको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई एक तरिकाले असर गर्नु हो जुन यस समस्यालाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ एडीएचडी उपचार उपकरणहरू पनि छन् जस्तै ट्राइजेमिनल नेरभ उत्तेजना जुन धेरै प्रभावकारी साबित भएको छ। अनिवार्य रूपमा, यसले मस्तिष्कको केही खास क्षेत्रमा एकदम कम स्तरमा विद्युतीय दालहरू पुर्‍याउँछ जुन ADHD हुन सक्छ। यो एक व्यवहार परिमार्जन उपकरण को रूप मा कार्य गर्दछ जुन परिमार्जन ब्यबहार, ध्यान स्प्यान, र व्यक्तिको भावनात्मक सन्तुलन मिलाउन मद्दत गर्न सक्छ।
यदि तपाईं एडीएचडी उपचार उपकरणको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, अब तपाईंलाई थाहा छ के खोज्ने। तपाईं आफ्नो चिकित्सकसँग औषधीको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जुन सहयोगी पनि हुन सक्छ। यो एक शर्त छैन जुन असाध्य छ। यद्यपि, प्रदान गरिएको समाधानहरू केवल तपाईं कसरी सोच र भावनामा परिरहनुभएको छ परिमार्जन गर्नका लागि बनाइएको हुन्छ। यी मध्ये एक तपाईंको लागि काम गर्न सक्दछ, यस एडीएचडी उपकरण सहित यस अवस्थाबाट पीडित मानिसहरूलाई मद्दत गर्नको लागि इलेक्ट्रिक उत्तेजना प्रयोग गर्दछ।